Lasa mpirafy ve i Beijing sy Carrie Lam avy ao Hong Kong? · Global Voices teny Malagasy
'Fanakianana imasombahoaka tsara rindra, fomba iray analàna an'i Lam hiala'
Voadika ny 29 Desambra 2020 2:49 GMT
Pikantsary avy amin'ny tatitra an-dahatsarin'ny RTHK momba ny fianianana nataon'ireo tomponandraikitra ambony ao HK notarihan'i Carrie Lam, lehiben'ny mpanatanteraka
Tamin'ny 22 Desambra, Hong Kong, tanàna misy mponina 7 tapitrisa, dia nahitàna 8.238 tranga-na COVID-19 voamarina sy fahafatesana 132 hatramin'ny volana Martsa. Hatramin'ny tapaky ny Novambra, nitombo ny isan'ny tranga isanandro tao an-tanàna, niainga tamin'ny 10 ka hatramin'ny 100 any ho any.
Rehefa ampitahaina amin'ireo tanàna toa an'i Londona, New York, sy Tokyo, azo lazaina ho miavaka ny fomba nifehezana ilay valanaretina, saingy miandrandra ny hahita fandresena ho “tranga aotra” i Beijing, mitovitovy amin'izay azo tany amin'ireo tanàndehibe tao amin'ny tanibe Shina.
Ny 16 Desambra, tao amin'ny pejiny Facebook, nokianin'i Leung Chun-Ying, lehiben'ny mpanatanteraka fahiny ary lefitry ny filohan'ny Kaomitim-pirenena ao amin'ny National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference (NCPPC) – kaomity fakankevitra ara-politikan'ny vahoaka shinoa – ho tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ireo fepetra raisin'i Honk Kong amin'izao fotoana izao hiatrehana ilay valanaretina, ary nolazainy fa nila nanao fandaharanasa hafa fitiliana faobe ny tanàna.
Tamin'ny Septambra, nandany vola efa ho dimanjato tapitrisa dôlara Honk Kong ny governemanta ao Hong Kong mba hanaovana fitiliana faobe ny COVID-19 ho an'ireo mponina ao an-tanàna. Saingy tsy an-tery ilay fandaharanasa ary vitsy latsaky ny 2 tapitrisa ireo olona tonga nanao fitiliana, izay tetsy andaniny, tsy nahitàna afa-tsy olona telopolo teo ho eo ihany nitondra ny otrikaretina.
Nitondra ny fangatahan'i Leung teo anatrehan'ny Antenimiera mpanao lalàna ireo solombavambahoaka mpomba an'i Beijing. Kanefa, milaza i Sophia Chan, Sekreteram-panjakana misahana ny Sakafo sy ny Fahasalamàna, fa ny fitiliana faobe ny COVID-19, na ho atao an-tery aza, dia tsy hahitàna vokany raha tsy arahana didy fihibohana an-trano, toy izay natao tany amin'ireo tanandehibe tany Shina. Nilaza ihany koa i Chan fa “raha ny lojika dia tsy hisy mihitsy izany” hoe hanidy vahoaka 7,5 tapitrisa mandritra ny 2 na telo herinandro izany.
Tanaty matoandahatsoratra iray tamin'ny 17 Desambra, narovan'ilay gazety Wen Wei Po mpomba an'i Beijing ihany koa ny fiondranan'ny lasitra shinoa ho entina manafoana ny fitomboan'ny tranga ao Hong Kong:
Voaporofo fa fepetra mahomby sy tsy azo ihodivirana entina miady amin'ilay valanaretina ny fanerena ny olona hanao fitiliana faobe, ny fanarahamaso tsy maintsy atao amin'ny fivezivezen'ny olona ary ny fanakatonana ireo distrika tena ahiana. Taorian'io fotoana io, mbola an-dalana mitrandraka ireny fepetra tsy maintsy arahana ireny foana i Hong Kong, ary ireo manampahaizana sasany mihevitra azy ireny ho tsy hay hazavaina hatreto… [CY Leung nanitrikitrika] fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ireo fepetra fifehezana ilay valanaretina tao Hong Kong, raha efa tratran'ny tao amin'ny tanibe Shina kosa ny fandresena “tranga aotra”. Tokony hitarika ny fiarahamonina hanatratra ny tanjona “tranga aotra” ihany koa ny governemanta ao Hong Kong. Atambaro ny hery sôsialy sy pôlitika rehetra ary avadiho ho zavatra azo ampiharina ny tsy azo ampiharina.
Mandritra izany, antony ampy hamotehana an'i Carrie Lam tsy ho isan'ny mpihazakazaka ho Lehiben'ny Mpanatanteraka amin'ny 2022 hoy ny sehatra mpomba ny demaokrasia ny kiana momba ny fifehezana ny valanaretina nanakianana ny governemantan'i Hong Kong.
Anisan'ireny i Ngan Shu-kau, mpikirakira ny raharaha amin'izao fotoana izao:
Ny fitakian'ny Antoko Kaominista Shinoa tamin'i Carrie Lam, ny amin'ny tokony hanarahany ireo fepetra barbariàna fanarahamaso napetraky ny tanibe Shina, dia mametraka azy ho anaty toedraharaha sarotra. Vantany vao nahitany tranga iray monja, azon'i Hong Kong arahana ve ny fomba fanaon'i Shina amin'ny fampihibohana distrika natao honenana ? Ohatra, raha toa ny tanànan'i Tai Koo misy tranga iray voamarina, azon'ny governemanta atao ve ny mibahana ireo arabe rehetra sy mandràra ny mponina rehetra tsy hivoaka, ary ny mpitsidika tsy hiditra? Azony atao ve ny mitaky amin'ny mponina rehetra ao tsy hividy sakafo na izay filàny andavanandro, afa-tsy indray mandeha isankerinadro? Ary raha manohitra ry zareo, hofantsihan'ireo manampahefana ve ny varavaran'ny olona ary avy amin'ny harona ahantona eny am-baravarankelin'ny tranony no takian-dry zareo hakàna izany?
Afaka hanetsika olona marobe mba hampiharana ireny fepetra ireny ve ny governemanta? Ananan'ny governemanta ve ny fahefana ara-drariny haneriterena ny fahalalahan'ny vahoaka? Ahoana ny momba ny ho fahavoazana tsy nahy ateraky ny fihibohana? Ho azo tànana ho tomponandraikitra ve ny governemanta raha toa misy olona maty mandritra ny fihibohana? Ahoana ny momba ny korontana sôsialy sy ny fahavoazana ara-toekarena? (…) Indrisy, avy any amin'ny Antoko Kaominista ny fahefana teo an-tànan'i Carrie Lam — tsy ho vitany mihitsy ny hanaraka fepetra tahaka izany ao Hong Kong, nefa tsy hahazo tsodrano izy raha toa ka mandà. Izany indrindra no maha-meloka azy, na ho inona na ho inona.
Rehefa jerena ny toejavatra misy ankehitriny, ho very fahefana i Carrie Lam. Mety ho azo novahana avy ao anatiny ihany ny olana mba tsy haharatsy endrika azy. Ankehitriny rehefa misy izao kiana imasombahoaka voarindra izao, io no fomba iray hafa anerena azy hiala amin'ny toerany.
Tany amin'ny tapaky ny Oktôbra, nipoitra ny resabe maro momba ny fahaverezan'ny fahatokisan'i Beijing an'ireo mpitarika ao Hong Kong, taorian'ny nanemoran'i Carrie Lam tampoka ny fanolorany ny politikany, voalaza fa hoe noho i Beijing naniry ny hanisy maso (hanitsy) ny votoatiny.
Volana iray taorian'izay, niisa efatra ireo mpanao lalàna nalàn'i Beijing tamin'ny toerany, izay nitarika tamin'ny fametrahana fialàna faobe nataon'ireo rehetra solontenan'ny mpandàla ny demaokrasia tao amin'ny Filankevitra Mpanao Lalàna ao Hong Kong — toerana nanambaràna ny pôlitikan'i Carrie Lam nony farany, nanoloana ny antenimiera izay efa tsy nisy feo mpanohitra intsony.
Tao anatin'ny antsafa iray tamin'ny faran'ny Novambra, natao ho an'ny South China Morning Post, nanamafy i Lam fa “niverina nahazo fahatokisantena” izy ary “niverina ho ilay izy taloha” mba hametraka fepetra henjana kokoa entina miady amin'ilay valanaretina.
Herinandro roa taty aoriana, tao anatin'ny vanimpotoana vaovao indray iainana ny fiparitahan'ny COVID-19, nahemotr'i Xi Jinping ny fihaonan'izy sy Lam fanaony isantaona rehefa mifarana ny taona. I Carrie Lam no lehiben'ny mpanatanteraka voalohany tratry ny fanafoanana fitsidihana ofisialy hatramin'ny 1997 namerenana an'i Hong Kong tamin'i Shina.
Tao anaty matoandahatsoratra iray tamin'ny 15 Desambra, ny HK01 media mpomba an'i Beijing ety anaty aterineto, izay nametraka fisalasalàna momba ny fahafahan'i Carrie Lam hitantana an'i Hong Kong, dia nandika ilay fihetsika tsy mbola nisy hatrizay nataon'i Beijing ho toy ny mariky ny fahaverezan'ny fahatokisana an'i Lam, tamin'ny fanosohana ny hevitra hoe mety nisy fiantraikany ara-pôlitika ny tsy nahavitàny nifehy ilay valanaretina.